NEM စျေး - အွန်လိုင်း XEM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NEM (XEM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NEM (XEM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NEM ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $490 387 916.00
volume_24h_usd: $19 692 900.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NEM တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NEM များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NEMXEM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0597NEMXEM သို့ ယူရိုEUR€0.0505NEMXEM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0455NEMXEM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0543NEMXEM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.532NEMXEM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.376NEMXEM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.32NEMXEM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.222NEMXEM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0791NEMXEM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0835NEMXEM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.32NEMXEM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.463NEMXEM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.321NEMXEM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.47NEMXEM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.10.08NEMXEM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0819NEMXEM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0913NEMXEM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.86NEMXEM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.415NEMXEM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.36NEMXEM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩70.84NEMXEM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦23.06NEMXEM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.37NEMXEM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.63
NEMXEM သို့ BitcoinBTC0.000005 NEMXEM သို့ EthereumETH0.000156 NEMXEM သို့ LitecoinLTC0.0011 NEMXEM သို့ DigitalCashDASH0.000658 NEMXEM သို့ MoneroXMR0.00067 NEMXEM သို့ NxtNXT4.66 NEMXEM သို့ Ethereum ClassicETC0.0088 NEMXEM သို့ DogecoinDOGE17.23 NEMXEM သို့ ZCashZEC0.000725 NEMXEM သို့ BitsharesBTS1.84 NEMXEM သို့ DigiByteDGB1.91 NEMXEM သို့ RippleXRP0.212 NEMXEM သို့ BitcoinDarkBTCD0.00206 NEMXEM သို့ PeerCoinPPC0.198 NEMXEM သို့ CraigsCoinCRAIG27.21 NEMXEM သို့ BitstakeXBS2.55 NEMXEM သို့ PayCoinXPY1.04 NEMXEM သို့ ProsperCoinPRC7.49 NEMXEM သို့ YbCoinYBC0.00003 NEMXEM သို့ DarkKushDANK19.16 NEMXEM သို့ GiveCoinGIVE129.33 NEMXEM သို့ KoboCoinKOBO13.6 NEMXEM သို့ DarkTokenDT0.055 NEMXEM သို့ CETUS CoinCETI172.46